Ndị ọzọ Pianman P2P, Torrentz anaghị ekwu ezigbo | Akụkọ akụrụngwa
Ndị ọzọ nke P2P Refeyim, Torrentz anaghị ekwu ezigbo
N'ihe na-erughị otu ọnwa, anyị na-ahụ ntakịrị ntakịrị peeji ụfọdụ P2P dị mkpa na-agbada ìsì. Izu ole na ole gara aga anyị gwara gị maka mmechi nke KickAss Torrent, na-esochi njide nke onye nwe ya na Poland, site na ozi Apple nyere. N’ụdị okwu ndị a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ibe weebụ ngwa ngwa kwụsị ịrụ ọrụ dịka ọ dị.
Mana taa anyị na-ekwu maka mmechi nke weebụsaịtị ọzọ, Torrentz, nke ejidewo obodo dum na mberede, na-enweghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla. Torrentz, nke kụrụ n'ahịa ọbụna tupu Pirate Bay aghọwo otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma mgbe KickAss Torrent gasịrị, ebe ọ bụ nyocha ọchụchọ ụdị Google, na-egosipụta naanị igbe ọchụchọ na ibe obibi ya.
Dị ka KickAss Torrent na ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị peeji niile iyi, ọ naghị echekwa ụdị faịlụ ọ bụla nke nwere ike ime ka ọ bụrụ isiokwu nke ikike iwu nwebisiinka. Mana n'agbanyeghị ịnabataghị ụdị faịlụ ndị a, a na-ahụkarị mgbe ajọ ifufe ahụ na-eme mkpesa dị iche iche, kewara n'etiti United States na United Kingdom. Ọ bụ mgbe ahụ ka Torrentz malitere ịgbanwe ngalaba na-anwa izere njikwa nke ndị isi Europe na America.
Ọ dị ka ndị nwe ya ma ọ bụ onye nwe Torrentz ahụla na ụdị ọrụ a nwere ike iduga n'ụlọ mkpọrọ na kama ịre ọrụ ahụ na weebụsaịtị ndị ọzọ (ihe a na-ahụkarị na afọ ndị a) ekpebiela ime ka ndị kpuru ìsì mee nke ọma. O yikarịrị ka ịnatala ụdị iyi egwu sitere na gọọmentị wee họrọ maka ọsọ ọsọ, belata ndị ìsì ma rara onwe gị nye ihe ọzọ. N'agbanyeghị na a na-enyere igbe ọchụchọ aka, ọ bụrụ na anyị nwaa ịme ọchụchọ, web ga-enye anyị nsonaazụ ndị a: «Torrentz ga-ahụ gị n'anya mgbe niile. Farewell ».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ndị ọzọ nke P2P Refeyim, Torrentz anaghị ekwu ezigbo
Samsung ga - ebido 7 Note na 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa
Samsung Galaxy Note 7 Vs Samsung Galaxy S7 Edge, duel nke titans